काठमाडौं, १० बैशाख । प्रदेश ४ को भ्रमणमा निस्कनुअघि राजनीतिक डिनर आयोजना गर्ने विषयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले परामर्श थालेका छन् । प्रदेश १ को भ्रमणबाट काठमाडौं फर्केलगत्तै भेटघाटमा व्यस्त पूर्वराजा शाहले विभिन्न राजावादी संघ संस्थाका प्रतिनिधित्वसँग भेटघाट थालेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार भेटघाटका क्रममा पूर्वराजा शाहले केही दिनपछि बृहत् डिनर कार्यक्रम राख्ने र त्यो कार्यक्रममा सबै पार्टीका नेताहरुलाई बोलाउने योजना रहेको सुनाएका छन् । प्रमुख दलका नेताहरु आइदिँदैनन् कि ? भन्ने आशंकाका विषयमा पनि उनले चासो देखाएको बुझिएको छ ।
पूर्वराजासँग हालै भेटे र फर्केका एक धार्मिक कार्यकर्ताका अनुसार यतिबेला पूर्वराजा राजसंस्था पुनस्र्थापनामा भन्दा पनि राष्ट्रि अखण्डता र सनातन हिन्दू राज्य कायम गराउने अभियानमा छन् । यस विषयमा उनले मुख्य राजनीतिक दलका महत्वपूर्ण नेताहरुलाई समेत गोप्य रुपमा भेटघाट गरिसकेको राजावादीहरु बताउँछन् ।
समाचार स्रोतका अनुसार आफूलाई अति राजावादी देखाउनेहरुसँग पनि पूर्वराजा शाह सशंकित देखिएका छन् । उनले भन्ने गरेका छन्–मेरो रेकर्डमा राजतन्त्रको पक्षका संघ संस्थाको संख्या ४५६ वटा छन् ।
प्रत्येक संस्थासँग एक हजारजना हुने हो भने पनि करिब पाँच लाख संख्या हुन्छ तर, ४५६ संस्थाहरुका मान्छे जम्मा गर्दा चार सय पनि पुग्दैन किन ?
प्रदेश १ को भ्रमणका क्रममा पनि विभिन्न संस्थाको ब्यानर छाँगेर पूर्वराजालाई भेट्न जानेहरुको लाइन नै देखिएको थियो । भेटघाट गर्न आउनेहरुलाई उनले भन्ने गरेका थिए–तपाईहरु एउटै छातामुनि आबद्ध हुनोस्, यसरी छरिएर राम्रो भएन ।
हन्दु र गणतन्त्रभन्दा मलामीकै चिन्ता !
हिन्दु राज्यको एजेन्डा हटाउन माग गर्दै महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङलगायतका २५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले ज्ञापनपत्र दिएपछि पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) भित्र खैलाबैला सुरु भएको छ ।
पार्टी स्थापनाको अवसर पारेर आगामी जेठ १५ गते पार्टी एकीकरण गर्ने तयारीमा तीनैवटा राप्रपा पुगेको अवस्थामा हिन्दु राज्यको एजेन्डाबारे विवाद भएपछि बबाल मच्चिएको हो ।
हिन्दु राज्यको एजेन्डा झिक्दा कमल थापा र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीको पार्टी एकीकरणको विपक्षमा जाने भन्दै अध्यक्ष राणाले मानिरहेका छैनन् ।
यसैगरी, गणतन्त्रको एजेन्डामा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । राजतन्त्र पुनर्बहालीको एजेन्डालाई स्वीकार गर्न नहुने भन्दै सुनिल थापा, नवराज सुवेदी, हरिबहादुर बस्नेतलगायतका नेताहरूले अर्को बखेडा सुरु गरेका छन् ।
गणतन्त्र स्वीकार गर्ने एजेन्डामा कमल थापा र डा. लोहनीसमेत सहमत भएका कारण पार्टी एकीकरण हुने भयो भन्दै सुनिल थापा समूहले समाचार प्रवाह गरेको थियो । यो समाचार किरण गिरीमार्फत प्रवाह भएको उनीहरूको दाबी छ ।
‘तीनवटै राप्रपा गणतन्त्रको एजेन्डालाई स्वीकार गर्दै एक हुने’ भन्ने समाचार प्रवाह भएको भोलिपल्टदेखि राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) को कार्यालयमा जान किरण गिरी नसकेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
सुनिल थापा समूह कुनै हालतमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको एजेन्डामा नजाने र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको एजेन्डा स्वीकार नगरे कमल थापा र डा.लोहनी पार्टी एकीकारणमा सामेल नहुने अवस्था उत्पन्न भएपछि अध्यक्ष राणा केही दिनअघि दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए ।
पार्टीभित्रको गणतन्त्रवादी समूहलाई सम्झाई दिन भन्दै राणाले दिल्लीबाटै भाजपाको एक टोली पठाएका थिए । समाचार स्रोतका अनुसार उक्त टोली सुरुमै हरिबहादुर बस्नेतको घर पुगेको थियो । टोलीले गणतन्त्रको अडान छाडिदिनुपर्यो भन्ने प्रस्ताव राख्नासाथ बस्नेत राक्किँए ।
उनले भने– ‘भारतको सबै चाल मैले बुझेको छु, हिजो राजतन्त्र फाल्ने, आज सम्भावना नै नभएको राजतन्त्रलाई पुनर्बहाली गरिदिन्छौं भन्दै सोझो ज्ञानेन्द्रलाई फसाउने ?’ यति भन्दै उनी आफन्तको विवाहमा जानु छ भन्दै कोठाभित्र पसे, भाजपाको उक्त टोली पनि निराश भएर फक्र्यो, तरुणमा उल्लेख छ ।
तर यो समूहलाई फकाउने प्रयास भने जारी छ । लोकेन्द्रबहादुर चन्दले टेलिफोन गरेर सुवेदी र बस्नेतलाई भनेका छन्–‘पार्टी एकीकरणपछि सत्तामा पुगौंला, राजतन्त्र पुनस्र्थापना गरौंला भनेर मैले एकीकरणको प्रयास गरेको होइन, अब हामी डाँडामाथिका जुन भइसक्यौं, कम्तीमा पनि आर्यघाटमा मलामीको संख्या बढोस् भनेर मात्रै मैले प्रयास थालेको हुँ, हामी तीनतिर भइरह्यौं भने कार्यकर्ता अब लाखापाखा लग्नेछन्, मरेपछि मलामीसमेत नहुने अवस्था आउँछ ।’